I-aple iphone 7 vs i-samsung galaxy s7 - umgangatho wefowuni, ubomi bebhetri kunye nesiphelo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPhone 7 vs Samsung Galaxy S7
Njengoko sele kukhankanyiwe, isithethi esiphambili se-iPhone 7 siphindwe kabini njengesixhobo sendlebe, kwaye iifowuni zivakala zicocekile kwaye zikhwaza, zisishiya sinengxaki yokuva ukuba ngubani na ofowunayo. Ezi mics zintathu zokucima ingxolo zikwenzile umsebenzi obalaseleyo wokulungisa ingxolo yangasemva, kunye nokuhambisa amazwi ethu ngokuqinisekileyo ukuya kwelinye icala.
I-S7 ikwasebenza kakuhle xa kufikwa kumgangatho wokufowuna - amazwi apakisha izinto ezininzi ngendlebe, kwaye acocekile, ngaphandle kokugqwetha okukhulu. Eli thamsanqa lidlulela kwelinye icala lomgca, apho iimakrofoni ezisefowunini zinceda ukuvelisa amazwi kubafowunelwa bethu abavakalayo nabahlukileyo.
Qhubeka phambili, bantu, akukho nto ingumzekelo kunyamezelo lwebhetri kubo bobabini, kodwa baya kukufumana imini yonke.
I-iPhone 7 kunye ne-apos; s 1960 mAh juicer yayilungile kwiiyure ezingama-7 kunye nemizuzu engama-46 yesikrini-ngexesha lethu lokulinganisa kwebhetri. Akukho nto ingaqhelekanga, kodwa yi-apos entle kakhulu ye-buck, kwaye iya kukufumanela usuku lomzekeliso ngejusi oza kuyigcina. Ngaphandle kokuba udlale ngaphezulu kweeyure ezine zePokemon Go, ewe, zonke iibhejethi zicinyiwe. Akukho kubiza ngokukhawuleza okanye ukumpompa ngaphandle kwamacingo kwi-iPhone 7, kwaye kuyakuthatha iiyure ezimbini kunye nemizuzu engama-20 ukuyifaka ngokupheleleyo - hayi ngqo ifowuni ephezulu kunye nokuhamba.
I-Galaxy S7 inebhetri ye-3000 mAh, kodwa ilawula kuphela unyamezelo lweeyure ezingama-6 kunye nemizuzu engama-37 kwibhentshi lethu, elinokwanela usuku kunye nomsebenzi weapos, kodwa impelaveki ekude kwitshaja ayinakuba semakhadini . Ukuhlawulela ngandlela thile, inikezela ngamanye amaxesha okhawulezayo okutshaja kudidi- zombini ezinentambo kunye ezingenazingcingo- kwaye unokuhlawuliswa ngokupheleleyo kwimeko efileyo engaphantsi kweyure enesiqingatha, nto leyo entle kakhulu.
Ubomi bebhetri(iiyure) Ephakamileyo kungcono I-Apple iPhone 7 7h 46 imiz(Umyinge) I-Samsung Galaxy S7 6h 37 imiz(Umyinge)
Ukutshaja ixesha(imizuzu) Ezantsi kungcono I-Apple iPhone 7 141 I-Samsung Galaxy S7 88
Ukuba i-Galaxy S7 yayilindele umlo olula ngokuchasene ne & ldquo; efanayo endala & rdquo; I-iPhone 7, ikwinto yothusayo. I-Apple ikwazile ukuqhubela phambili ngokutya okufana nobomi bebhetri, ukubonakaliswa kombala, ukubonakala kwangaphandle, kunye nobuchule bokumamela-enyanisweni, uninzi lwamasebe akufuphi kwaye athandekayo kumsebenzisi ophakathi. Umbala obanzi obanzi kunye nekhamera iyodwa kufanelekile ukuba utsibe, njengoko oku kuthintela ikamva kwi-iPhone 7 kwiminyaka emibini ezayo ubuncinci. Ukuqiniswa yi-iOS 10 eyonyuswe kakhulu, isoftware ye-iPhone kunye nesoftware ayikaze ibe sisityebi okanye icocwe ngakumbi, nayo.
Ewe, isikrini esincinci esincinci se-iPhone 7 sinokuba sisithintelo xa kuthelekiswa no-5.1 & rdquo; I-Galaxy S7 kwezinye, kodwa ngayo iza kube inkulu kakhulu kwaye inokulawulwa esandleni, ke ukukhetha ityhefu yakho ebiza kakhulu akukho lula. Apha sifika kwindlela enqumlanayo-i-Galaxy S7, iyinkukhu yasentwasahlobo, ngoku ixabisa ubuncinci iBenjamin esezantsi kune-iPhone 7, kwaye loo msantsa uza kukhula ngokuhamba kwexesha. Owu, ewe, ukuba nezinto zamva nje akunakuba lula kuhlahlo-lwabiwo mali.
IPhone 7 umnxeba
Umboniso wombala obanzi wexesha elizayo nolawulo lwemibala esebenzayo
Ukubonakala okugqwesileyo ngaphandle
I-Samsung Galaxy S7
Ukutshaja okukhawulezayo kunye nokungasebenzisi cingo kudidi
Ubuchwephesha bobabini bePixel yinkosi egxile
Iyafikeleleka ngakumbi, kunye nenketho yokwandiswa kokugcina
Uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat ngoku luqengqelekela kwi-Motorola Moto G4 kunye neMoto G4 Plus
Iifowuni ezindala zeHuawei ezisengozini yokuphulukana neeapps zikaGoogle kunye neenguqulelo ezinelayisensi ze-Android
Ixabiso lePixel 4 XL, ukuthengiswa kunye nomhla wokukhutshwa kwi-T-Mobile, Verizon, Best Buy kunye ne-AT & T.